I-Bang & Olufsen ibhengeza i-Wireless nge-Adaptive Active Noise Cancellation | Ndisuka mac
I-Bang & Olufsen ibhengeza ngaphandle kwamacingo ngaphandle kokurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo
Okwangoku sifumana iintlobo ezininzi zee-headphone ezingenazingcingo ezibonelela ngokurhoxiswa kwengxolo phakathi kweenkcukacha zazo. Ukusuka kwam ndivela eMac sizamile iizandla zeefowuni kwaye ngoku U-Bang no-Olufsen babonisa ezinye ezinikezela, ngokutsho kwenkampani, ukucinywa kwengxolo okwenyani.
Bacacisa ukuba ukufezekisa olona rhoxiso lungcono, ii-headphone zisebenzisa uhlobo lwe-ANC oluhambelana nokudibanisa ukurhoxiswa kwengxolo kunye nokutywinwa kwentloko yentloko uqobo. Ukuya kuthi ga kwimakrofoni ezintandathu zenza umsebenzi wokuhlengahlengisa ngokuzenzekelayo amanqanaba e-ANC kwaye zisebenzise itekhnoloji yesikhombisi somkhombandlela ukuphucula umgangatho wefowuni xa sithetha kwaye kukho ingxolo ngaphandle.
Olunye ulwazi oluphambili lwezi Beoplay EQ
I-Beoplay EQ entsha inikezela ngokweenkcukacha ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20 zokudlala kunye nelo cala okanye ezinye Iiyure ezingama-6,5 ngokurhoxiswa kwengxolo okuqhubekayo, Zenziwe ngealuminiyam ene-anodized ngaphandle, ukumelana namanzi kunye nothuli ngesatifikethi se-IP54, iigramu eziyi-8 zobunzima nganye, uqhagamshelo lweBluetooth 5.2 kwaye ziya kufumaneka kwilizwe lethu ukusukela nge-19 Agasti ezayo.
Njengesiqhelo kwii-headphone zangoku, ibhokisi yokutshaja inikezela nge-Qi yokutshaja ngaphandle kwamacingo kwaye inezibuko le-USB C. Ezi headphone zintsha ziya kuba nemibala eliqela ekhoyo: i-anthracite emnyama kunye nombala obizwa ngokuba yisanti. Into ebalulekileyo kubo bonke abasebenzisi abazimisele ukuthenga ngokungathandabuzekiyo lixabiso kwaye kule meko zifikelela kwi-399 euro.
Uya kufumana ezinye iinkcukacha kunye nenketho yokuthenga ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yenkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Bang & Olufsen ibhengeza ngaphandle kwamacingo ngaphandle kokurhoxiswa kwengxolo okusebenzayo
Ezinye iibhetri azisebenzi kwii-AirTags kunye neApple icebisa
Ukuba uyiphosa i-Snow Leopard Safari, ngoku ungayifaka kwakhona kwi-Mac yakho yangoku